कोरोना संक्रमणबाट बाबुको मृ’त्यु, कि’रियापुत्री बसेका छोरालाई गाउँलेले घरबाटै ल’खेटे! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना संक्रमणबाट बाबुको मृ’त्यु, कि’रियापुत्री बसेका छोरालाई गाउँलेले घरबाटै ल’खेटे!
जापानका प्रधानमन्त्री आवेद्वारा रा’जीनामाको घो’षणा
१७ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ यसप्रकार तोकेको छ । बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन विभागका अनुसार आज बुधवार (भदौ १७ गते, सेप्टेम्बर २) को बजारमा अमेरिकी डलर १ को खरिददर ११६ रुपैयाँ ६४ पैसा र विक्रिदर ११७ रुपैयाँ २४ पैसा रहेको छ । बुधवारको तुलनामा डलरको भाउ आज १३ पैसाले बढेको छ । त्यसैगरी आज युरो १ को खरिददर १३७ रुपैयाँ ८५ पैसा र विक्रिदर १३८ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ । आज युरोको भाउ बुधवारकै मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै युके पाउण्ड १ को खरिददर १६० रुपैयाँ ४० पैसा र विक्रिदर १६१ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ । बुधवारको तुलनामा आज पनि पाउन्डको भाउ झण्डै ३० पैसाले घटेको छ । यस्तो छ अन्य मुद्राको विवरण